Ihe ICT n'efu site na LGfL | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
Otu akụkụ dị mkpa nke London Grid for Learning (LGfL) maka brọdbandị dị elu nke ụlọ akwụkwọ London nwere bụ nkuzi na mmụta mmụta n'ịntanetị a na-enye n'efu.
Ihe omumu ihe omumu a di elu di na ulo akwukwo LGfL jikọtara ya na ndi nkuzi na umu akwukwo nwere ike inweta LGfL ọdịnaya ebe obula na iji LGfL Unified Sign On (USO) aha njirimara na paswọọdụ.
Ọ bụrụ na ị bụ nne na nna ma ọ bụ onye nlekọta nke nwa akwụkwọ Oakleigh ma chọọ ịnweta ọdịnaya a n'ụlọ maka nwa gị biko kpọtụrụ ụlọ ọrụ na 020 8368 5336 maka nkọwa ma ọ bụ site na ntanetị anyị ụdị.
Ihe na-enweghị ohere Gwuo & mụta
Igosipụta egwuregwu ọhụụ na ọhụụ ọhụụ, ihe emelitere ga-eme ka ihe ndị na-enweghị isi ga-abụ otu n'ime ihe ntanetị kacha amasị LGfL, yana mmemme 150 maka afọ ndị mbụ ụmụaka ịchọpụta!
Gaa Leta Ọrụ Na-adịghị
PB Bear na-egosi akụkọ vidiyo vidio 5 na akwụkwọ okwu, yana ọrụ dị iche iche dabere na ebumnuche ntọala. A na-edekwa ihe omume a na usoro ọmụmụ KS1. Nwere ike ịchọta nchịkọta nke ihe omume site na ịhọrọ ahọta mmemme na ibe akwụkwọ akụkọ.
Gaa na PB Bear
A kọwara PowerPoints mara mma maka ịgụ na agụm akwụkwọ, Maths, PSHE na Sayensị iji hazie ụmụ akwụkwọ nwere nnukwu nsogbu mmụta na arụ ọrụ na ọkwa P. Ihe ndi ozo ndi ozo di nma, nke kwesiri umuaka ndi na aru oru na P Level, ndi ozo na onye nkuzi Nick Wonham kere ha site na Bridge Bridge na North London.
Gaa Leta Ngwaọrụ
Fairy Tales bụ ngwa ọrụ ọkaibe na-arụkọ ọrụ ọnụ maka ụmụ akwụkwọ na akpịrịkpa P. Zipu ndị ọkachamara na SEN Assist ewerewo akụkọ ifo isii kachasị amasị ya ma gbanwee ha ka ha bụrụ mmuta na mmuta nke nwere ike igosi ụmụ amaala na-ewu ewu.
Gaa na Akụkọ ifo
Vidiyo Central HD
VideoCentral HD na-enye ngwanrọ dị mfe iji websaịtị na-enye ndị nkuzi nọ na London ohere ịkekọrịta vidiyo na faịlụ vidiyo na ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ ibe na ụlọ akwụkwọ ibe. A na-ebugo faịlụ vidiyo na vidiyo site na iji interface weebụ echedoro wee tinye ya na akpaghị aka maka ntanetị ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ.
Gaa Leta Video Central HD
Onweghi ihe dịka 'ihe nwebisiinka nwebisiinka' - yabụ LGfL chọrọ ịnye akụrụngwa dijitalụ enwere ike iji ya mee ihe na agụmakwụkwọ n'emebighị iwu. LGfL Gallery na-akwado ọtụtụ onyonyo dị elu site na Royal Collection Trust na Ben Uri Gallery.
Gaa LGfL Galley